Q Anon, ihe ngosi nke Epstein, njikọ Clinton, 'obodo eziokwu': ọ ka ga-adị mma! : Martin Vrijland
ROMY & SAVANNAH AKA
AKWỤKWỌ NDỊ ỌZỌ
AKWPPKWỌ NDPP NA-EGO
Q Anon, ihe ngosi nke Epstein, njikọ Clinton, 'obodo eziokwu': ọ ka ga-adị mma!
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 12 July 2019	• 7 Comments
Nye ọtụtụ ndị, Donald Trump bụ nwoke ga-ekpughe 'miri emi'. Ajụjụ Anon biara na otu onye na-ekwupụta otu ihe na nke a na-akpọ 'eziokwu obodo' wee bịa zuru ezu. Site na mkpughe banyere Jeffrey Epstein, mmetụta ahụ ga-abawanye ọbụna. "N'ikpeazụ, a na-achọpụta na ebe ugwu ahụ dị," bụ echiche ahụ. Ma na mberede, ọ na-agbapụta ọzọ otu isiokwu na weebụsaịtị Zerohedge, nke ga-egosi na Epstein bụ ihe nzuzo nke ọrụ nzuzo ahụ nke merụrụ ndị mmadụ.
Ka anyị wepụta oge ma jụọ ajụjụ na-esonụ: ànyị na-eche n'echiche na n'oge 'data buru ibu', smartphones na ịntanetị, ihe nchịkwa ahụ amaghị kpọmkwem otu esi ejikwa ndị mmadụ eme ihe site n'ịzaghachi na mkpa maka eziokwu ma na-enye ya 'eziokwu'?
Ọ bụ ezie na akụkụ dị ukwuu nke ndị bi na ya nwere ike ghara ịhapụ ya, e nwere obere akụkụ nke e mepụtara site na nwata ka ọ ghara ige ntị n'ike mmụọ nsọ ahụ ma wepụ onwe ya na edemede ahụ (lee lee nkọwa a), ọ dị mkpa ka ụbụrụ mmadụ na-arụ ọrụ na Alice na Wonderland oke bekee tunnels na-arịwanye elu ma yie ka ha nwekwuru alaka. Ị ga-eche ihe ịtụnanya ọhụrụ mgbe niile. N'ezie, ị nwere ike ikwu na ndị na-elekọta internet na nnukwu data maara kpọmkwem otú nyocha nke ụbụrụ mmadụ na-aga, ọ pụkwara ịduzi ya. Enwere mpi uhie ohuru ohuru di njikere maka ihe ndi ozo di n'eziokwu. Akuku buru ibu nke nwoke ahu nke sitere n'ike mmụọ nsọ maara na a na-aghọgbu ya, ma na-achọ eziokwu ya n'ime usoro ihe nhụba.
Ònye nwere ike ịhụ kpọmkwem ebe nrụọrụ weebụ ị gara na nke isiokwu ị gụrụ? Ònye nwere ike ịhụ kpọmkwem ihe ịchọrọ ma ọ bụ otú ị si emeghachi omume na Facebook? Igwe dị elu na-agba ọsọ na ndabere ma nwee ike ịgụ ihu ihu gị site na igwefoto smartphone gị, nwere ike ịlele ọnụ ọgụgụ obi gị, nwere ike ịhụ kpọmkwem ebe ị nọ na onye ị na-atụgharị, nwere ike ịmepụta nchịkwa nke ọnọdụ uche gị ma nwee nghọta zuru oke otú ụwa gị si dị. E nweghị aka mmadụ ọzọ. Ọtụtụ ndị na-achọpụta na mgbasa ozi dị n'aka nnukwu ego, ma ọ bụ na ọ baghị uru ịchọta na a chọpụtakwara ọtụtụ eziokwu nke eziokwu? Ọ bụrụ na nnukwu ndị na-emepụta nnukwu ihe ọmụma na ebe nchekwa data na-achịkwa iji mee ka onye ọ bụla nwee ike iji nlezianya na-edozi ya, ọ dị mfe iji zụọ mkpa maka 'eziokwu'. Alice nwere ọchịchọ ịmata ihe, n'ihi ya, Alice na-enye potion magic na ọdụ ọhụrụ rabbit mgbe oge.
"Mana Vrijland, ị na-akatọ akụkọ ahụ ma ị na-agbalị ịkọwa ndị mmadụ na mmejọ, ya mere, ị na-esonye na ya n'onwe gị". Ana m ekwu okwu na-adịbeghị anya na mmegide a na-achịkwa na amamihe nke ogwe aka iji meghachi omume na mkpa maka 'eziokwu'. N'ihi ya, ọ dị mkpa ịghọta na anyị na-ebi na mgbe ọ na-aghọ ihe na-agaghị ekwe omume ịmata ọdịiche nke 'adịgboroja' si 'n'ezie'. Naanị onodu ebe ihe omimi miri emi di na ihe omuma n'akwukwo ihe aputara na ayi agagh enwe ike inukwasi ihe obula. Dị ka ihe atụ, onye na-agwa m na Julian Assange dị n'ezie? O nwere ike ịbụ na ọ bụrụ na ọ bụ onye na-eme ihe ma ọ bụ onye na-eme ihe nkiri, akụkọ ahụ dum nwere ike ịghọ olulu rabbit, bụ ebe ndị niile na-achọ eziokwu na-adaba. Ihe dị ukwuu banyere ụdị nsị nke rabbit ahụ n'onwe ya bụ na digger maara kpọmkwem ebe ọ na-edu. Ana m agbalị ịkọwa gị na ị gaghị adaba n'ime ụlọ ndị rabaị.
Obodo 'eziokwu' bụ usoro ntanetị nke onwe ya. Ndị mmadụ nwere ike ịhapụ onwe ha kpamkpam n'ịchọ eziokwu ahụ ma ọ bụrụ na ị jikwaa ịbanye ha na wiwi gị ma ghara igwu ha n'ime oghere onwe ha. Anyị bụ nanị Alice na Wonderland bụ ndị na-erichapụ mmanụ ọzọ na ederede 'na-aṅụ m' wee rie achịcha ọzọ na ederede 'rie m'. A na-amanye anyị n'ime usoro ntanetị nke eziokwu na ihe ndị Q Qon kwuru na mgbagwoju kachasị ọhụrụ na-arụ ọrụ na netwọk pedrey na Jeffrey Epstein. "Donald ụda na-agbagha 'miri emi'"Ee, n'ezie (emela m ọnụ ọchị). A na-enye anyị eziokwu Eziokwu Anwụrụ Anwụrụ na-aṅụ oge mgbe. Nnukwu aghụghọ nke ihe nkiri nkiri 'The Matrix' bụ na ebe anyị ga-eso white rabbit. Eziokwu Hollywood a na-achịkwa bụ otu ihe ahụ dịka mgbasa ozi na mgbasa ozi mgbasa ozi ọzọ. Ha bụ usoro nwube nke a na-eme tupu e gwute ya bụ nke eziokwu ahụ bụ eziokwu kachasị mma.
Alice nke dị na Wonderland Tunnel of Power na-agbalị itinye uche gị na "911," "Wikileaks," "The Deepstate," "Jeffrey Epstein," ya mere i nwere ike ịbanye n'ime ọdụm rabbit ahụ wee daa na usoro ebighi ebi. Ọ bụrụhaala na ị na-eje ije na-acha ọcha rabbit ị ga-apụ n'ime ọzọ usoro usoro. Site na isi usoro mgbasa ozi nke mgbasa ozi, ntị gị agbanweela na usoro mgbasa ozi ọzọ. Kwụsị ịgbaso oke bekee ọcha! Nke ahụ bụ naanị ihe ị ga-eme! Enweghị oke bekee dị ọcha iji gosipụta gị ebe miri emi dị oke. Ọ bụ banyere ịchọta na oke oke bekee bụ 'ihe ebube': ala ala, Trumanshow, eziokwu ụgha. Ihe kachasị mkpa nke ga-abanye n'ime ya bụ na a na-ejide gị n'eziokwu eziokwu na na ebumnuche ya bụ: ka ị nọgide na nke eziokwu ahụ. Ihe kacha mkpa dị mkpa bụ na anyị agaghịzi abanye n'ime oghere rabbit nke eziokwu dị n'ihu ma mgbasa ozi na mgbasa ozi ọzọ. Gwuo onwe gi; ziri ezi na isi.
Oge eruola iji mebie ihe omuma. A na-ahụ mmadụ na eziokwu ụgha zuru oke nke mgbasa ozi na web weebụ zuru ezu. A naghị akpọ 'weebụ' maka ihe ọ bụla. Udide na-eme ka weebụ wee jide anụ ya. Ozugbo akara na-ama jijiji, ududo na-abanye n'ime anụ oriri ya ma na-ekpuchi ya. Echiche ụwa anyị dabeere na nghọta nke anya na ntị anyị. Anyị na-ekiri TV; ozugbo anyị na-apụ n'èzí, akwụkwọ akụkọ, magazin na mgbasa ozi gbara anyị gburugburu; anyị na-ele anya na ama anyị ma ọ bụ nụ redio. Nnukwu ọnyà ududo weebụ na-agbagharị na belt. Oge eruola na-arịgo n'olulu ahụ rabbit; ịhapụ weebụ. Ihe kacha mkpa nke onye anyị na-echeta na-amalite site n'icheta eziokwu ụgha nke Truman ụgha. Nke ahụ pụtara na ị ghaghị gbanyụọ ọwa niile ị na-edebe na eziokwu ahụ. Cheta gị onye ị bụ.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: zerohedge.com
Ịntanetị, osisi nke ihe ọmụma, Apple & ndụ ebighị ebi
The 'ego' bụ usoro AI nke na-emepụta autopilot nke mmadụ-avatar bio-robot
Ndi otutu mmadu ndi gbara gi gburugburu n'ebughi nkpuru obi (ndi adighi anu aru)?
Eluigwe na ụwa bụ ngosipụta: okpukpe niile, usoro nkwenkwe ọ bụla bụ aghụghọ
Anyị na-anọgide na-eji ụzọ aghụghọ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mgbasa ozi dị egwu
Tags: ANON, Epstein, agba, Jeffrey, netigree netwọk, ụda, pedophiles, Q
Banyere chepụtara (Onye edemede Profaịlụ)
Sistegharịa URL | Comments RSS nri
SalmonInClick dere, sị:
12 July 2019 na 14: 58
N'uba buru ibu, nke a bụ ihe nchekwa nchekwa (psyp), n'ihi na a maara nke a ihe karịrị afọ iri site na ọrụ na ndị ederede. Ma, ọ bụ ihe gbasara oge na ihe ndọpụ uche, n'ihi ya, ekwela ka ị ṅụọ n'ime ịchụ nta wit. Unplug
Banye iji zaghachi
Martin Vrijland dere, sị:
13 July 2019 na 14: 29
Ya mere, nke a
Mmiri dere, sị:
13 July 2019 na 16: 42
Mundus jupụtara na ya na decipiatur, ụwa chọrọ ka a ghọgburu, ya mere ọ ga-aghọ aghụghọ.
Riffian dere, sị:
16 July 2019 na 00: 06
SandinG dere, sị:
16 July 2019 na 12: 50
nke ọma, anyị ka kwesịrị ịtụ ndị mmadụ na-enyo enyo anya na atụmatụ nzuzu ha ..
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ dere, sị:
16 July 2019 na 03: 04
Enwere m ajụjụ na-emetụtakwa edemede gị gara aga.
Kedu otu ị ga - esi achọpụta ma ị nwere mkpụrụ obi ma ọ bụ na ịnweghị?
16 July 2019 na 09: 11
Avatar na-enweghị isi ga-eleghara echiche nke mkpụrụ obi anya dị ka ihe nzuzu na-eche na ọ gaghị eche mgbe ọ nwere mkpụrụ obi. Avatar na-adịghị ndụ ga-ekwu ka ọ bụrụ na ọ na-ahụ ihe onwunwe n'anya, na-ekwenye na ọ nweghị ihe ọ bụla ma ọ nwụọ bụ na ụwa niile dị.
Otutu oge ka o gha enwe ike itinye aka n'echiche nke okpukpe n'ihi na amuta ya, ma o ghaghi iju onye obula di.
Ọ / ya agaghị ajụ ajụjụ a "amnye ka m bụ?" Ọ kwenyesiri ike "Abụ m ahụ m".
Nkume a-aza kagbuo zaghachi
Ị ghaghị abanye iji nwee ike ịza ajụjụ.
" The 'ego' bụ usoro AI nke na-emepụta autopilot nke mmadụ-avatar bio-robot
Kedu ka anyị ga - esi mee mgbanwe dị ukwuu ma ọ bụrụ na 99% anaghị adị ndụ? »
Chọọ BATTLE ma họrọ Ebe a
> Nleta ha ruru: 16.768.413
Nleta ha: 4.165.936
IHE NDỊ A GA-EME
Agha US nke Amụma buru amụma dị nso na nso: Ndị agha BLM na-aga na Georgia
Coronavirus covid-19: nke anyị anaghị anụ Maurice de Hond na Willem Engel
Akwụkwọ ọhụrụ Martin Vrijland nke akpọrọ 'Coronavirus covid-19 ebe njedebe a gwụ?' dị ugbu a
Ulo elu Escher Penrose nke ndi mmegide FvD, Willem Engel na Maurice de Hond
Junebọchị Sọnde June 28 gosipụtara Malieveld ịhụnanya, ndidi na ntụkwasị obi netwọ nchekwa Virus Madness
MGBE A GA-AHỤ
Martin Vrijland op Coronavirus covid-19: nke anyị anaghị anụ Maurice de Hond na Willem Engel
RCS op Coronavirus covid-19: nke anyị anaghị anụ Maurice de Hond na Willem Engel
Benzo Wakker op Coronavirus covid-19: nke anyị anaghị anụ Maurice de Hond na Willem Engel
Martin Vrijland op Coronavirus covid-19 na sayensị: Kedu ka ọ si abanye n'ahụ gị ma olee otu ị si ebufe ya?
Tinye adreesị ozi ịntanetị gị ịdebanye aha ma nweta ozi-e ozugbo na isiokwu ọhụrụ. Ị nwekwara ike pịa bọtịnụ na-acha akwụkwọ ndụ iji nweta ozi ntanye na ekwentị gị, i-pad ma ọ bụ kọmputa.
NKWUKWU NDỊ NA-EKWU NDỊ ỌZỌ
GỤKWU IHE NDỊ DỊ N'AKWỤKWỌ NDỊ DỊ N'IME YA
© 2020 Martin Vrijland. Ikike niile echekwara. Okwu site na Solostream.
Site n'ịnọgide na-eji saịtị ahụ, ikwenye na iji kuki. ozi ndị ọzọ
Ntọala kuki na ebe nrụọrụ weebụ a ka edoro ka 'kpo kuki' inye gị ohere kachasị mma nchọgharị .Ọ bụrụ na ị nọgide na-eji saịtị weebụ a na-enweghị agbanwe agbanwe nkwụsị kuki gị ma ọ bụ pịa "Nabata" n'okpuru ebe ahụ, ị ​​kwenyere na ntọala ndị a.